Moz Local: Ampitomboy ny fanatrehanao an-tserasera an-toerana amin'ny alàlan'ny lisitra, laza ary fitantanana atolotra | Martech Zone
Mitovy amin'ny ny ankamaroan'ny olona mianatra momba sy mahita orinasa eo an-tserasera, tena ilaina ny fisian'ny Internet. Ny fampahalalana marina momba ny orinasa, sary tsara kalitao, ny fanavaozana farany, ary ny valiny amin'ny fanamarihana dia manampy ny olona hianatra bebe kokoa momba ny orinasanao ary mamaritra matetika raha misafidy ny hividy aminao na ny mpifaninana aminao izy ireo.
Fitantanana lisitra, raha atambatra amin'ny fitantanana laza, dia afaka manampy ny orinasa eo an-toerana hanatsara ny fisian'izy ireo sy ny lazany amin'ny alàlan'ny famelana azy ireo hitantana ny sasany amin'ireo singa lehibe indrindra ho an'ny mpitsidika sy ny motera fikarohana. Miaraka amina vahaolana maromaro any, zava-dehibe ny fiheverana ireo lafin-javatra toy ny fahombiazana, fanamorana ny fampiasana ary ny vidiny.
Miaraka amin'ny fitantanana lisitra mandeha ho azy sy ny fizarana angon-drakitra amin'ny toerana marobe miampy fitantanana laza, Moz Local ahafahanao mitazona haingana ny lisitra marina, mamaly ny hevitra, ary mandefa fanavaozana sy tolotra. Ny fitaovanay mora ampiasaina dia natao hanamafisana ny fanatrehanao an-tserasera an-toerana, hampitombo ny fifandraisan'ny mpanjifa, ary hanatsarana ny fahitana anao amin'ny fikarohana eo an-toerana miaraka amin'ny fotoana sy ezaka kely. Namboarina ho an'ny karazana orinasa rehetra izy, manomboka amin'ny orinasa madinidinika ka hatrany amin'ny orinasa lehibe, orinasa tokana misy toerana maro, ary masoivoho.
Tazomy ny lisitra marina
Ho an'ny SEO eo an-toerana, raharaha lisitra feno sy marina. Ny fitazonana ny adiresy, ny ora fiasana ary ny laharan-telefaona tsy miovaova sy maharitra dia ilaina amin'ny fikarohana ary koa ny traikefan'ny mpanjifa. Moz Local dia manampy anao hamorona sy hitantana mora ny lisitry ny orinasanao eo an-toerana ao amin'ny Google, Facebook, ary tranokala hafa hanampiana ny mpanjifa hahita sy hisafidy ny orinasanao.
Azonao atao ny manavao ny lisitrao rehetra avy amin'ny takelaka tokana, ary ianaro izay angona, sary, na atiny hafa ilaina mba hamenoana ny lisitrao sy ny mombamomba anao mba hahafahan'ny mpanjifa mamantatra haingana izay ataon'ny orinasanao ary raha mety aminy izany. Ny lisitra dia zaraina ho azy eo amin'ny tamba-jotra mpiara-miasa aminay, ary miaraka amina lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitra mitohy, ny lisitray dia mijanona ho havaozina manerana ny motera fikarohana, lahatahiry an-tserasera, media sosialy, fampiharana ary mpanangona data miaraka amin'ny fotoana sy ezaka kely. Ary ny fizotrantsika mandeha ho azy amin'ny famantarana, fanamafisana ary famafana ireo lisitra duplicate dia manampy amin'ny fanafoanana ny fisavoritahana.
Moz Local koa dia manome anao tondro fampisehoana lehibe, toy ny Visibility Index, isa amin'ny Internet, ary isa feno amin'ny profil. Hampahafantatra anao ihany koa izy hoe rahoviana ianao no handray andraikitra amin'ny fanairana sy fampandrenesana momba ireo entana mila fitandremana.
Mampiasa an'i Moz eo an-toerana izahay hanaraha-maso ny satanay, hahita mora foana ny fahitan'ny lisitray amin'ny fikarohana ary hahatakatra ny zava-bitan'ny lisitra amin'ny ambaratonga samihafa. Afaka nanery ny fampahalalana tsy tapaka ho an'ny lisitra lehibe izahay ary faly amin'ny valiny hitanay.
David Doran, talen'ny paikady ao amin'ny Oneupweb
Zahao maimaimpoana ny lisitry ny orinasanao
Tantano ny lazanao
Amin'ny ambaratonga eo an-toerana, ny famerenana dia afaka manimba orinasa iray. ny 87% n'ny mpanjifa no nilaza manome lanja ny hevitry ny mpanjifa izy ireo ary 48% ihany no hihevitra ny hampiasa orinasa tsy misy kintana efatra. Raha ny marina dia mety tsy hiseho amin'ny valin'ny fikarohana akory ireo orinasa madinidinika raha tsy mahafeno tokonam-baravarana ny hevitr'izy ireo.
Ny fijerena tsara dia afaka manampy amin'ny fampitomboana ny laharam-pikarohana nataonao, fa ny valiny tena izy amin'ny fanadihadihana ratsy na mifangaro dia mitarika fifandraisana bebe kokoa amin'ny orinasanao ary koa manome ny mpanam-pahaizana ny fotoana hanovana ny isa azony.
Moz Local dia mamela ny mpampiasa hanara-maso mora foana, hamaky, ary hamaly ny hevitr'ireo motera fikarohana sy tranokala avy amin'ny takelaka tokana. Zava-dehibe indrindra ho an'ny SEO sy ny marika ny fitantanana laza, ary ny Moz Local dia mandefa fanavaozana sy fampandrenesana amin'ny fotoana tena izy rehefa misy famerenana vaovao navoaka. Ambonin'izany, ny dashboard dia mamela anao hanaraka fironana ao anatin'ny tsikera, misafidy teny fanalahidy manokana sy salanisa miseho amin'ny hevitra maro. Ireo fironana ireo dia manome valiny sarobidy avy amin'ny mpanjifa momba izay ataon'ny orinasanao mety sy izay mety mila fanitsiana azy.
Mizara fanavaozana sy tolotra
Ny fandraisana an-tanana ny mpanjifa mandritra ny segondra vitsy dia mihasarotra isan'andro. Miaraka amin'ireo tranonkala, rohy, ary fampahalalana maro dia maro hita ao amin'ny pejy voalohany amin'ny valin'ny karoka, fanamby ny miavaka amin'ny mpifaninana.
Ny fihetsiky ny mpanjifa sy ny fifandraisany amin'izany anefa dia fanavaozana sy fanolorana matetika. Ny fitazonana ny mpanjifa hahalala ny vaovao farany momba ny orinasanao, ny vokatra na serivisinao vaovao, na ny tolotra manokana dia mety hitaona azy ireo hividy avy aminao. Azonao atao koa ny mizara vaovao amin'ny Facebook na mandefa amin'ny fanontaniana & valiny ao amin'ny piraofilin'ny orinasanao Google avy amin'ny Moz Local.
Moz Local dia manampy anao amin'ny fitantanana mora ny lisitry ny orinasanao sy ny lazanao ao amin'ny Google, Facebook ary tranokala hafa hanampiana ny mpanjifa hahita sy hisafidy ny orinasanao. Natao hanamafisana ny fisian'ny orinasan-tserasera eto an-toerana, hampitombo ny fifandraisan'ny mpanjifa, ary hanatsarana ny fahitana amin'ny fikarohana eo an-toerana miaraka amin'ny fotoana sy ezaka kely.
Hitanay ny Moz Local ho sehatra mamirapiratra hanampy amin'ny fampivoarana ny fahitana eo an-toerana ny mpanjifanay. Miaraka amin'ny motera fikarohana mampiavaka ny valiny miorina amin'ny toeran'ny mpampiasa, i Moz Local dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fivezivezena ara-organika amin'ny ankapobeny.
Niall Brooke, Mpitantana SEO ao amin'ny Matalan
Fantaro bebe kokoa momba an'i Moz eo an-toerana
Tags: lahatahiry orinasamanangona hevitralahatahiryfitantanana lisitratolotra orinasa eo an-toerananaoty eo an-toeranahevitra eo an-toeranaMozmoz eo an-toeranafitantanana lazasehatra fitantanana lazafamerenana ny fitantanana
Manangana lanja amin'ny dingana rehetra amin'ny dia ataon'ny mpanjifanao